Ndụmọdụ maka ịkụ na ilekọta phlox na-acha anụnụ anụnụ na-emeghe - Osisi - 2020
Phlox gbasawara acha anụnụ anụnụ: ihe ọkụkụ na nlekọta
Phloxes bụ okooko osisi aha ya si n'asụsụ Grik sụgharịa dị ka "ire ọkụ". Okooko osisi pere mpe na-etolite ahihia, ma n’otu oge oku ifuru, na-ejuputa na ndo nile na-enwu gbaa n’ogiri ahihia ahu. N'agbanyeghị aha ahụ, palette nke ụdị a sara mbara - ị nwere ike ịchọta ọ bụghị naanị ndo na-acha ọkụ ma ọ bụ nke pink, kamakwa ndị na-ajụ oyi. Ndị furu ọhịa na-enwekarị mmasị na Flox the Spread na okooko osisi nke acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ.
Phlox Spread (ma ọ bụ agbasa) bụ ahịhịa mkpụrụ osisi na - eto eto, bụ nke Phlox na ezinụlọ Sinyukhovyh.
Thisdị a nwere ahịhịa na-akpụ akpụ na ahịhịa nwere akpụ akpụ na ha. O ruru ogo nke 20-30 cm. Akwụkwọ ya dị lacentate, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Inflorescences na-etolite scutellum zuru ebe niile, petals ahụ nwere ọdịdị nke obere ihe, a na-ejikọ aka na isi site na akụkụ dị warara. Ọ bụ n'ihi n'ụdị nke inflorescences ka a na-akpọ phloxes ndị a "igbasa". Ifuru ahụ n’onwe ha nwere nke ihe dị ka sentimita atọ n’obosara.
Okooko osisi nke ụdị a nwere acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ.
Oge nke okooko ya na-adịgide ntakịrị karịa otu ọnwa, site na njedebe nke May. Sma mma ya nwere ike ịdị iche kwa afọ, ma jiri nlekọta kwesịrị ekwesị, ifuru ahihia ga-acha ga-acha ngwa ngwa n'oge ọ bụla.
Mere eme! Akọwaputara Flox nke Ebe nile bụ ndi okacha amara webata omenaala na narị afọ nke iri na asatọ, mana tupu mgbe ahụ, ndị na-ahụ maka ahịhịa na-ama ya.
N'okike, osisi a mbụ toro na North America, na mpaghara nke nwere okwute, ala kpọrọ nkụ, yana oke ọhịa juru. Ugbu a, enwere ike ịchọta osisi a ọbụna na mpaghara ubi nke etiti Russia ma ọ bụ na Siberia.
Phloxes na Design Garden: Jiri
Ọtụtụ mgbe, a na-eji phloxes emebe na odida obodo dị ka ihe ndabere. Eperede akwa anụnụ anụnụ nke obere ifuru ga-ejupụtacha n'ụzọ zuru ezu n'akụkụ ugwu ugwu, na gburugburu ọdọ mmiri mmadụ siri ike, n'akụkụ gazebo ma ọ bụ osisi na-agbasa.
Phlox Panic: iche, akuku na nlekọta
Ejikọtara ụdị a na okooko osisi na ahịhịa ndụ iji nye saịtị ahụ ihe ịchọ mma n'oge ndị ọzọ. Akwukwo ahihia nke nwere ogho ocha na acha ọcha (dika ihe anakpo Mee May) ga-adi nma.
Ire! Mgbe okooko osisi, ifuru osisi phlox mkpa ka ebipụ ka ọ ghara imebi ọdịdị nke ifuru ahihia.
Uto Phlox: Repzọ mwepụta
Sployed Phlox - ifuru ubi. You nwere ike tolite ha na saịtị ahụ n'ọtụtụ ụzọ, nke ọ bụla nwere ụfọdụ njirimara. Methodzọ isi mụta nwa bụ ahịhịa.
Mmeputakwa site na oke ohia
Douglas Phlox: Mkpuchi ala
Thezọ kachasịsọ iji nweta ọtụtụ site n'otu osisi bụ ikewa ọhịa n'ọtụtụ akụkụ. A na-eme nke a n'oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ n'oge opupu ihe ubi:
A na-eji ohia ahụ nwayọ nwayọ, oke ala na-ama jijiji wee gbasaa.
A na-ekewapụ ọtụtụ osisi na ya ma ọ bụ kewaa ohia n'ime akụkụ 2-3.
A na-etinye akụkụ nke ọ bụla na saịtị ahụ iche.
Mere eme! Nkewa nke akụkụ ka a ga-ebu ụzọ were nwayọ dịka o kwere omume, kpachara anya ka ọ ghara imebi sistemụ ma ọ bụ azumahia nke osisi ahụ.
Mgbasa site na ivu
Site na iji ahihia, enwere ike igbasa ohia rue oge ezumike ozo. Ebe ọ bụ na mkpịsị nke Phlox agbasara na-agbasa n'akụkụ ala, ọbụlagodi ndị na-elekọta ubi agaghị enwe nsogbu na usoro a.
Na-eto eto Ome nwere ike pịa n'ala na a nkume ma ọ bụ itinye ya na aka a aka, na-echezọ iji moisten ala n'okpuru ha. Ọtụtụ mgbe, na osisi a, ụfọdụ ome na-agbanye mkpọrọgwụ.
N'oge opupu ihe ubi, a na-ebipụ ome na mgbọrọgwụ sitere na nne nne ma na-atụgharị ya na ebe na-adịgide adịgide.
Too phlox site na nkpuru - ogologo oge na ume. Ma n'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ubi nwere ahụmahụ ga-eto eto n’udo karịa ka a zụtara n’ahịa ubi ma ọ bụ n’ụlọ ahịa.
Kwadebe ala ngwakọta. Maka phloxes, humus, ala na-emebi emebi, peat na aja na akụkụ dị iche iche dabara adaba.
Yet ụwa n'ime arịa.
Mikpuo nkpuru osisi 1.5-2 cm n’ime ala, n’ebe dị anya site na ibe ya.
Jiri obere griin kpuchie akpa ahụ.
Mere eme! Ọ dị mkpa na-elekọta ndị osisi - ịgba ala ma hapụ ha ka ha kubie kwa ụbọchị. Ozugbo oge ihu igwe ga-agwụ, na mmalite oge opupu ihe ubi, a ga-akụ ome ahụ kụrụ n'ala.
E kwesiri ịmalite ịkpụ ya na Mee, mgbe osisi na-enweta ike zuru oke. Ọ na-eme dị ka nke a:
A na-egbutu obere igbupute ma sie ike na akuku; aghaghi ibu uzo abuo na igba agha.
Capezọ mgbapụ rutere n’ala kpọrọ nkụ.
Ejiri griin haus kpuchie ya (karama plastik dị mma).
Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, oge ịkpụ ahụ ga-agbanye mkpọrọgwụ, n'afọ ọzọ ọ ga-ekwe omume ichere okooko.
Ebe maka ifuru
Phlox awl: akuku na nlezi anya na ala
Ebe kacha mma ị ga-eji banye Phlox gbagwojuru anya ga-abụ mpaghara kpuchie n’ogige ma ọ bụ ebe a na-amụnye ọkụ, nke ndò na-ekpuchi n’oge awa nri ehihie. Ya mere, a na-aghakarị ụdị a n'okpuru osisi na-asọ asọ, ogologo ọhịa ma ọ bụ n'akụkụ ọdụ mmiri.
Attentionaa ntị! Ahịhịa ebe akụrụngwa ịmepụta ebe a na-egwupụta nkume ma ọ bụ ubi a kụrụ ya nke ọma dị ka ihe ọkụkụ. Ọdọ mmiri dị nso nwere ike ịbụ mgbakwunye, ebe ọ na-eme ka ọrụ nke iru mmiri na-eme ugboro ugboro.
Nnukwu ngwakọta nke phlox na obere osisi
Ala maka ifuru
Ala mmiri loamy nwere obere ala ma ọ bụ nke nwere agba nwere nke ọma dabara adaba na phlox. Na mkpokọta, okooko osisi ndị a enweghị nkọwa dị iche iche maka ala. Iji oge ntoju karie, ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ ka ha kee osisi phlox na ala ndị ọzọ na-eme nri, rụrụ arụ, ikuku na mmiri.
Ọ dị mkpa na ebe ahụ apịtị adịghị, oke ala mmiri adịghị ebili ruo na mgbọrọgwụ nke osisi. Ala dị oke mmiri ga-eduga na ọnwụ nke ifuru.
Okooko osisi ndị a achọghị nlekọta pụrụ iche. Nhazi usoro omume adịghị iche na ilekọta okooko osisi ndị ọzọ, mana ọ dị mkpa iji lelee ụfọdụ.
Atọ na igbo osisi
Phlox hụrụ ahịhịa ndụ n'anya. Ọ bụrụ na ebe ị na-akụ ifuru dị na ndò, na nso ọdọ mmiri ma ọ bụ na-akpaghị aka na-egwu mmiri - ị gaghị achọ mmiri mmiri.
N’oge ihu igwe na-ekpo ọkụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ifuru ahụ dị n’ebe anwụ na-acha, ọ dị mkpa ka ị na-agba ihe ọkụkụ ahụ mmiri kwa ụbọchị ntakịrị. Ọnọdụ mmiri agaghị etolite. Isgbara mmiri ka mma jiri mmiri oyi dozie n'uhuruchi.
Ebe ọ bụ na ala dị n'akụkụ phlox na-abụkarị nke rụrụ arụ, ata ata na-apụtakarị na ya. A ga-ewepụ ha mgbe oge ka ihe ndị ahụ bara uru na mmiri ghara ifuru.
Ejiji dị mma ga-enyere gị aka iwelikwu ịma mma nke okooko ma mee ka oge ya dịkwuo elu. N'ihe banyere phlox, inwere ike uzo ozo na nri ndi ozo di ndu.
A na-etinye fatịlaịza na mbubreyo mmiri na mbido June. Maka ebumnuche ndị a, dabara:
nsị anụ ọkụkọ na superphosphate;
ngwakọta nke fluorine na nnu nnu;
nsị anụ ọkụkọ na nnu nnu.
A na-eji mmiri wụchaa ngwaahịa ọ bụla.
Dị Mkpa! Ọ baghị uru ifatilaiza phlox mgbe oge ntoju.
Kwachaa ihe dị mkpa maka phloxes mgbe oge ezumike. Na mbu, ome kpọnwụrụ akpọnwụ ga-emebi ihe ịchọ mma nke ifuru, na nke abụọ, ọ dị mfe ịkwadebe okooko osisi maka oge oyi na okooko osisi na-esote.
Gwaa nke mere na ome ka dị ihe dịka 10 cm n’elu ala. A na-ete isi ntọala ohia ahụ.
Na-akwadebe phlox maka oge oyi
Beforewa tupu oge ihu igwe dị n'okpuru phlox kwesịrị ịgwakọta. Nri inyịnya, peat na humus dị mma maka nke a. N’okpuru otu ohia ga-aga ọkara bọket nri ma ọ bụ bọket atọ nke peat.
Ejiri alaka osisi spruce ma ọ bụ n'elu osisi dị iche iche mechie elu. Ọ baghị uru ijikọ flokses na burlap ma ọ bụ usoro ndị ọzọ; ha na-eji nwayọ anakwere ntu oyi. N'oge opupu ihe ubi, mgbe oyi gachara, a na-ewepụ alaka spruce.
Ọrịa Phlox na ahụhụ, jikọta ifuru na osisi ndị ọzọ
A na-ahụkarị Phloxes maka ọrịa na ụmụ ahụhụ ma ọ bụrụ na a naghị elekọta ogige ifuru ahụ nke ọma. Ala amịrị ma dị mma, wepu ahihia na ọgwụgwọ nje, bụ ezigbo mgbochi maka nsogbu ọ bụla na okooko osisi ndị a.
Otu esi emeso nje na phlox ọrịa:
Slugs, snails, pennies, spider mites, thrips na nematode ga - enyere aka "Aktara", "Sumi-alpha", "Kinmix".
Powdery rọm, phomosis, septoria na-agwọ Bordeaux mmiri, Fundazol, sulfate ọla kọpa.
Ekwesịrị iji usoro ọgwụgwọ ọ bụla dabere na ntuziaka.
Phlox the Sprayed na-aga nke ọma na akwa ifuru nwere nnukwu daisies, odo na-acha odo odo ma ọ bụ nke na-acha uhie uhie, na-enwe osisi siri ike.
Omens na akụkọ ifo
Floxes n'oge ochie nwere akụkọ mgbe ochie na ihe iriba ama. Ebe obu na aha ifuru nwere “oku” putara ihe, akuko maka ihe ha mere n'uwa jikọtara oku.
Phlox nwere ike icho mma n'ụlọ ahụ, ọ bụrụ na ị gbutuo ya ma tinye ya na ite
N'elu ya, Odysseus, na-agbadata na ndị otu ya na ọchịchị ọchịchịrị nke Hades, ọkụ na-enwu. Mgbe njem ya, eze na ndị agha ya tụbara ọwa ọkụ n’ala, phloxs pụtara n’ọnọdụ ha mgbe obere oge gasịrị.
Eziokwu na-adọrọ mmasị! Ekwenyere na phlox na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ burgundy nwere ike mebie agụụ n'etiti ndị hụrụ ya n'anya. Ma ndị na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ ga-enyere aka ịchụpụ nne nwanyị ahụ n'ụlọ.
Ọbụna ndị na-ekweghị na ihe ịrịba ama, ifuru a ga-eweta mmetụta dị mma. Matọ ya na-atọ ụtọ na okooko osisi na-enwu gbaa ga-eme ka ubi ahụ jupụta na mmiri.